जनतासमाचार डट्कममा बुधवार प्रकाशित समाचारका मुख्य अंशहरू :
१.अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको अवस्थामा मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । बुधबार नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटक मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताउनुभएको हो ।
२.सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि रात्रिकालीन व्यवसाय तथा रेष्टुरेन्ट बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बेलायत भेरियन्टको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि रात्रिकालीन व्यवसाय कडाइका साथ बन्द गराउन आग्रह गरेको हो ।
३. सन् २०२० मा मानवअधिकार उलङ्घनका घटना बढेकोप्रति एमनेस्टी इन्टरनेशनलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सन् २०२० मा मानवअधिकारका घटनासम्बन्धी आज वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एमनेस्टीले मानवअधिकार हननका घटनाका दोषीलाई प्रभावकारी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । एक सय ४९ देशको मानवअधिकारको अवस्थालाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
४.नेपाल पत्रकार महासंघको आज सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना शुरु भएको छ । काठमाडौंको महासंघको केन्द्रीय कार्यालय सिनामंगलमा भर्खरै मतगणना शुरु भएको हो । काठमाडौंमा एक हजार दुई सय ३४ मत खसेको छ । यस्तै एशोसिएट तर्फको मतगणना काठमाडौं रंगशालास्थित कबडहलमा शुरु भएको छ । जिल्ला, प्रतिष्ठान र प्रदेशको मतगणना पनि सम्बन्धित जिल्लाको महासंघ कार्यालयमा शुरु हुँदैछ।
५.एपीएफ क्लबलाई २–० गोलले पराजित गर्दै संकटा क्लब आहा रारा गोल्ड कपको फाइनलमा पुगेको छ । पोखरा रंगशालामा बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा एपीएफलाई मन्छाउँदै संकटा फाइनलमा पुगेको हो । क्वार्टरफाइनलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई १–० को नतिजामा पराजित गर्दै संकटाले विभागीय टोलीलाई पाखा लगाउँदै फाइनल यात्रा तय गर्यो ।
६.नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशमा दिउँसै रात पार्ने काम हुन थालेको बताउनुभएको छ । रुकुमको सल्लेबजारमा बुधवार आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले देशमा दिउँसै रात पार्ने काम हुन थालेकाले जनता जागरुक हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
७.नेकपा एमाले का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले कर्णाली प्रदेशको संयोजक प्रकाश ज्वालालाई बनाउने भएको छ । कर्णालीमा ज्वालाको नेतृत्वमा प्रदेश कमिटी बनाउने तयारी भइरहेको हो । प्रदेश सचिवमा भने नीरज आचार्यको नाम प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । केन्द्रीय नेताहरूको निर्देशनमा आचार्य अहिले प्रदेशमा कमिटी, कार्ययोजना बनाउन व्यस्त हुनुहुन्छ ।
८.पाँचखाल नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन त्यतिबेला कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च जोखिम बढ्दै गएपछि रोकिएको थियो । रोकिएको लगानी सम्मेलन नगरले चालू आर्थिक वर्षमा गर्ने कार्यतालिका बनाए पनि पुनः कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न सक्ने भएपछि रोकिएको छ ।
९.उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले निजामती प्रशासन झिङ्गे टसाई सोचबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित नेपाल सरकारका सचिवहरुबीच निजामती सेवाका विविध पक्ष सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले निजामती प्रशासनमा झिङ्गे टसाई सोच प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बताउनुभएको हो ।
१०.अफगानिस्तानमा २४ घण्टाको अवधिमा ५९ जना मारिएका छन् । विद्रोहीका क्रियाकलाप एवं भिडन्तमा परेर ५९ जनाको मृत्यु भएको हो । अफगान युद्धको अनुगमन गरिरहेको समूहका अनुसार विगत २४ घण्टामा आठ जना सर्वसाधारण, नौ जना सैनिक र ४२ जना तालिबानी लडाकूको ज्यान गएको छ। हिंसा न्यूनीकरण समूहले हिंसामा परेर ३० जना सर्वसाधारण, ३८ जना तालिबानी लडाकू र सात जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएको जनाएको छ।
११.राजधानीको कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा भवन खाली गराउन नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । नेपाल सरकारको नेपाल ट्रस्ट कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनी कन्सेप्ट डेभेलपर्स प्रालिका नाममा सूचना जारी गर्दै भवन खाली गराउन भनेको हो ।
१२.गौमुखी गाउँपालिका–३ रजवारामा एक गोठमा आगलागी हुँदा दुई बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । बुधबार बिहान ९ बजे स्थानीय रमेश रानाको गोठमा आगलागी हुँदा उहाँका दुई छोराछोरीको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा सात वर्षीय छोरा हिमाल राना र तीन वर्षीया छोरी चन्द्रकला राना रहेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीका अनुसार घरमा अभिभावक नभएको बेला आगलागी भएको थियो ।
१३.धार्मिक यात्राका क्रममा गोसाइँकुण्ड जाने भक्तजनलाई भोजन र बासको शुल्कमा सरलीकृत पार्न नयाँ मूल्यदर कायम गरिएको छ । गोसाइँकुण्ड मार्गअन्तर्गत चोलाङपाटी, लौरीविनायक र गोसाइँकुण्ड क्षेत्रमा सञ्चालित होटल तथा लजका व्यवसायीले यात्रुसँग अप्रत्याशित रूपले चर्को शुल्क असुल गरेको भन्ने अधिकांश यात्रुबाट व्यापक गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाको पहलमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमार्फत नयाँ मूल्यदर कायम भएको हो ।
१४.नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको निधनले पार्टी र देशले योग्य नेता गुमाएको बताउनुभएको छ । स्वर्गीय जोशीको १३औँ पुण्यतिथिका अवसरमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको शोकसभामा बोल्दै सभापति देउवाले स्व जोशी भविष्यमा पार्टी हाँक्नसक्ने नेता भएको बताउनुभयो ।
१५. जिल्लामा सार्वजनिक स्थलमा मास्क अनिवार्य गरिएको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अन्तर्गत मास्क निवार्य गरिएको हो । मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा बसेको कोभिड -१९ संकट बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने गराउने निर्णय गरेको हो । साथै मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाही गरिनेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
१६. बुधबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले बढेको छ । मंगलबार छापावाला सुन प्रतितोला ८७ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आज प्रतितोला ८८ हजारमा कारोबार भइरहेको छ । त्यसैगरी तेजाी सुन प्रतितोला ८७ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
१७.महाकाली अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना भएका भीमदत्त नगरपालिका–१५ का ४५ वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ । भारतको गुजरातबाट गत चैत २२ गते फर्कनुभएका उहाँमा कोरोना संक्रमण देखापरेपछि महाकाली अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो।
१८.एपीएफ क्लबलाई २–० गोलले पराजित गर्दै संकटा क्लब आहा रारा गोल्ड कपको फाइनलमा पुगेको छ । पोखरा रंगशालामा बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा एपीएफलाई मन्छाउँदै संकटा फाइनलमा पुगेको हो । क्वार्टरफाइनलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई १–० को नतिजामा पराजित गर्दै संकटाले विभागीय टोलीलाई पाखा लगाउँदै फाइनल यात्रा तय गर्यो ।
१९.नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप ६ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । पाँचौ स्वास्थ्य बीमा दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौं आयोजित कार्यक्रममा सरकारले थप ६ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
२०.नेपालमा थप तीन सय ३९ जना मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा चार हजार एक सय जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा तीन सय ३९ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या दुई लाख ७८ हजार आठ सय नौ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२१.बलिउड अभिनेत्री कटरिना कैफलाई पनि कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ । लक्षण देखिएपछि परीक्षण गराएकी कटरिनाको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । कोरोना संक्रमण भएपनि कटरिना आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा बस्ने थालेको बताइएको छ । पछिल्लो समय बलिउडमा कोरोनाको असर बढी परिरहेको देखिएको छ ।
२२.सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि रात्रिकालीन व्यवसाय तथा रेष्टुरेन्ट बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बेलायत भेरियन्टको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि रात्रिकालीन व्यवसाय कडाइका साथ बन्द गराउन आग्रह गरेको हो ।
अमेरिकाको स्पेस एजेन्सी (नासा) ले मंगल ग्रहमा हेलिकप्टरको सफलतापूर्वक उडान सम्पन्न गरेको छ । एजेन्सीले